Tawhiidu al-Asmaa'i wa sifaati Archives - Page 2 of 4 - Ibsaa Jireenyaa
Category: Tawhiidu al-Asmaa’i wa sifaati
October 11, 2019 Sammubani One comment
October 4, 2019 Sammubani Leave a comment
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 7.4
October 3, 2019 Sammubani Leave a comment
C-Ibsa Aayaata maqaalee Malik, Maalik, Maliik fi jecha Mulk jedhu of keessaa qabanii–kutaa 2
Kutaa darbe keessatti ibsa aayaata muraasaa maqaalee kanniini fi jecha Mulk of keessaa qaban ilaalle jirra. Har’as itti fufuun izni Rabbiitiin ni ilaalla. Laa hawla walaa quwwata illa billah.
October 2, 2019 Sammubani Leave a comment
B-Sifaata maqaaleen Al-Maalik, Malik fi Al-Maliik of keessatti qabatan
Uumuun, ajajuun, mindaa fi adabbiin amaloota mootiif barbaachisaniidha
Imaamu ibn Al-Qayyim ni jedha, “Maqaa Mootii jedhuuf haqa isaa yoo kenniteef, uumuun, ajajuun, mindaa kennuu fi adabbiin, waa kennuu fi dhoowwachuun amala mootiitif barbaachisaa akka ta’an ni beekta. Amalli mootii kana waan barbaachisuf, kuni wanta hin hafneedha. (Mootii yommuu jedhamu wanti sammuu namaa keessatti dhufu, Aangoo ol’aanaa kan qabu, ajaju, dhoowwu, mindaa kennu (badhaasu), adabuudha.) Mootii irraa amaloota kanniin haaqun dhimma hin danda’amneedha. Mootiin haqaa Ergamtoota erguu, kitaabban buusu, gabroota ajajuu, isaan dhoowwu, mindaa isaaniif kennuu, adabuu, nama kabajni isaaf malu kabajuu, nama salphinni isaaf malu salphisuu barbaachisa.”
September 29, 2019 Sammubani Leave a comment
Warri iimaanaa Gooftaa isaanii beekuuf fedhan maqaalee gaggaarii fi sifaata ol’aanaa Isaa irratti xiyyeefachuu, barachuu, hiika isaanii hubachuu, haffazuu fi maqaalee kanaan Rabbii olta’aa kadhachuun isaan irra jira. Maqaalee gaggaariin Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa beekun diini Rabbii olta’aati, hundee Gooftaa ofii itti beekaniidha. Maqaalee Isaa keessaa maqaaleen qalbii wanta biraatti hirkachuu fi mootummaan dhugaa Isaan ala wanta biraatiif ni ta’a jedhanii amanuu irraa qulqulleessan, “Malik, Maalik fi Maliik”. Namni maqaalee kanniin sirritti yoo hubate, qalbiin isaa Rabbiin ala wanta biraatti rarra’uu irraa ni qulqulloofti, akkasumas, ajajoota Gooftaa isaa bakkaan gahuuf ni carraaqa.
September 15, 2019 Sammubani Leave a comment
C-Bu’aalee maqaalee Al-Khaaliq fi Al-Khallaaq beekuu fi itti amanuun argamu-kutaa darbe irraa kan itti fufe
4-Maqaa Rabbii “Al-Khaaliqatti” amanuun uumamtoota kaayyoo guddaaf akka uumee fi Inni tapha irraa qulqulluu akka ta’ee amanu namarraa barbaada. Namni waa hojjatu kamiyyuu wanta hojjatu san kaayyoo itti hojjatuuf ni beeka. Fakkeenyaf, namni mana ijaaru kaayyoo itti ijaaruuf beeka. Namni konkolaataa hojjatu kaayyoo konkolataan ooluf beekun kaayyoo san irratti hundaa’e hojjata. Akkanamutti lafaa olka’ee taphaaf ykn kaayyoo tokko malee maallaqa baay’ee baasun mana ni ijaaraa ykn konkolaataa ni hojjataa?